K-drama ချစ်သူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေ…😍 – Trend.com.mm
Posted on August 10, 2018 by Noel
သင်က K-Dramas ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီအရာတွေကို ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းနားလည်နိုင်မှာအသေအချာပါပဲ။
ဇာတ်ကားကထွက်နေပြီ။စာတန်းထိုးကမထွက်သေးဘူး။တော်ရုံစိတ်မရှည်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့စာတန်းမထိုးပဲလည်းကြည့်မယ်ဆိုတာချည်း။စာတန်းထိုးထွက်လည်း ထပ်ကြည့်တာပါပဲ။တစ်ရက်ပဲကြာတာတောင် မစောင့်နိုင်တာ K-drama ချစ်သူတွေအချင်းချင်းသာနားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ကိုယ်က ဒီမှာကောင်းခန်းရောက်နေပြီ။အမေကခေါ်လိုက်၊အဖေကခေါ်လိုက်၊ဖုန်းတွေလာလိုက်နဲ့ ကိုယ်မလုပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုထလုပ်လိုက်ရနဲ့ အဲ့ဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးကြုံရလို့ကတော့ ဇာတ်လမ်းပြန်ကြည့်နေရရင်တောင် တနုံ့နုံ့နဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်ဆို လာနှောင့်ယှက်သူ ရန်သူပဲ 😛 ကောင်းခန်းရောက်မှ စာတန်းထိုးတာမပါလာရင်လည်း ဘာကိုဒေါသထွက်လို့ထွက်ရမှန်းမသိ 😑
ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်တွဲကြည့်ပြီဆို များသောအားဖြင့် ဒုတိယမင်းသားချောချောလေးလည်းပါတတ်တယ်လေ။အထူးသဖြင့် ကိုယ့်မင်းသမီးကို ခေါင်းဆောင်မင်းသားက တအားတွေချေ၊တအားတွေရက်စက်နေပြီဆို စိတ်ထဲက အလိုလို ဒုတိယမင်းသားပေါ်လာပါစေဆိုပြီးကြိတ်ပြီးဆုတောင်းမိတတ်ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မင်းသားက မင်းသမီးအတွက်ဆို ဒုတိယမင်းသားက ကိုယ့်အတွက်ဆိုပြီး စိတ်ကူးကလည်းယဉ်မိသေး 😛
မသိဘူး ခေါင်းဆောင်မင်းသားကိုလည်းချစ်တယ် 😍
ဘယ်လောက်ပဲဒုတိယမင်းသားပေါ်လာဖို့ဆုတောင်းဆုတောင်း၊ခေါင်းဆောင်မင်းသားကိုလည်း သဘောမကျပဲမနေနိုင်တာ ကိုယ်တွေ K-drama ပရိသတ်တွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ကိုရွေးပါဆိုရင်တော့ ခေါင်းစားရတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကိုကြိုက်တာကိုးး🤭
အပိုင်းတစ်ပိုင်းပြီးသွားရင် အဆုံးမှာနောက်တစ်ပိုင်းအတွက် တစ်ခန်းနှစ်ခန်းပြတတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတစ်ပတ်ကို အပိုင်း ၂ပိုင်းပဲထွက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေမှာ နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကြိုပြီးခန့်မှန်းရ၊စောင့်ရနဲ့ အလုပ်တွေကိုရှုပ်နေတော့တာပါပဲ။ကိုရီးယားကားမှန်သမျှ မလွတ်တမ်းအားပေးသူဆိုရင်တစ်ချို့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ နောက်အပိုင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုသိနေတတ်ပါ့။
တစ်ပိုင်းကြည့်ပြီး နောက်တစ်ပိုင်းဆက်မကြည့်ဖို့ကို ဘယ်လိုမှစိတ်မနိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲ ညဘက်နောက်ကျနေပါစေ။ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်ကြည့်တတ်တာ ကိုယ်တွေလိုရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေပါပဲ။အမေက အိပ်လို့ပြောရင် စောင်ခြုံပြီးဖုန်းဖွင့်ဆက်ကြည့်နေကြ 😛
ကိုယ်တွေ သဘောတူတဲ့မင်းသား၊မင်းသမီးစပြီးကျီစယ်နေကြပြီဆို ကိုယ်တွေပါးစပ်က ပိတ်လို့မရတာမျိုး…😍
မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကျီစယ်ကြတယ်။သ၀န်တိုကြတယ်ဆိုရင်ကို ကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကပါ လိုက်ပြီးကြည်နူးနေတတ်။
ဒါကတော့ ကေဒရာမာချစ်သူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တွေသဘောကျရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကို ထပ်ပြီး တွေ့ချင်သေးတာကြောင့် ဇာတ်လမ်းက ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းခန်းလေးဖြစ်သွားရင်တောင် နောက်ထပ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ အပိုင်းတွဲထပ်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်နေတတ်ကြပါတယ်။
ကဲ ဟုတ်ရဲ့လား K-drama Fan လေးတို့ 😍တစ်ခြားအကြောင်းအရာလေးတွေရှိခဲ့ရင် မျှဝေခဲ့ဦးနော်
သငျက K-Dramas ခဈြသူတဈယောကျဆိုရငျ ဒီအရာတှကေို ၁ဝဝရာခိုငျနှုနျးနားလညျနိုငျမှာအသအေခြာပါပဲ။
ဇာတျကားကထှကျနပွေီ။စာတနျးထိုးကမထှကျသေးဘူး။တျောရုံစိတျမရှညျတဲ့ပရိသတျတှကေတော့စာတနျးမထိုးပဲလညျးကွညျ့မယျဆိုတာခညျြး။စာတနျးထိုးထှကျလညျး ထပျကွညျ့တာပါပဲ။တဈရကျပဲကွာတာတောငျ မစောငျ့နိုငျတာ K-drama ခဈြသူတှအေခငျြးခငျြးသာနားလညျနိုငျပါတယျ။
ဟုတျတယျဟုတျ? ကိုယျက ဒီမှာကောငျးခနျးရောကျနပွေီ။အမကေချေါလိုကျ၊အဖကေချေါလိုကျ၊ဖုနျးတှလောလိုကျနဲ့ ကိုယျမလုပျရငျမဖွဈတဲ့အရာတဈခုထလုပျလိုကျရနဲ့ အဲ့ဒီလိုအခိုကျအတနျ့မြိုးကွုံရလို့ကတော့ ဇာတျလမျးပွနျကွညျ့နရေရငျတောငျ တနုံ့နုံ့နဲ့ဖွဈနတေတျပါတယျ။ရုပျရှငျကွညျ့တဲ့အခြိနျဆို လာနှောငျ့ယှကျသူ ရနျသူပဲ ကောငျးခနျးရောကျမှ စာတနျးထိုးတာမပါလာရငျလညျး ဘာကိုဒေါသထှကျလို့ထှကျရမှနျးမသိ
ဒုတိယမငျးသားရှိဖို့ အမွဲဆုတောငျးမိဇာတျလမျးတှဲတဈတှဲကွညျ့ပွီဆို မြားသောအားဖွငျ့ ဒုတိယမငျးသားခြောခြောလေးလညျးပါတတျတယျလေ။အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့မငျးသမီးကို ခေါငျးဆောငျမငျးသားက တအားတှခြေေ၊တအားတှရေကျစကျနပွေီဆို စိတျထဲက အလိုလို ဒုတိယမငျးသားပျေါလာပါစဆေိုပွီးကွိတျပွီးဆုတောငျးမိတတျကွပါတယျ။ခေါငျးဆောငျမငျးသားက မငျးသမီးအတှကျဆို ဒုတိယမငျးသားက ကိုယျ့အတှကျဆိုပွီး စိတျကူးကလညျးယဉျမိသေး
ဘယျလောကျပဲဒုတိယမငျးသားပျေါလာဖို့ဆုတောငျးဆုတောငျး၊ခေါငျးဆောငျမငျးသားကိုလညျး သဘောမကပြဲမနနေိုငျတာ ကိုယျတှေ K-drama ပရိသတျတှပေါပဲ။ဒါပမေဲ့တဈယောကျကိုရှေးပါဆိုရငျတော့ ခေါငျးစားရတယျ။နှဈယောကျလုံးကိုကွိုကျတာကိုးး
အပိုငျးတဈပိုငျးပွီးသှားရငျ အဆုံးမှာနောကျတဈပိုငျးအတှကျ တဈခနျးနှဈခနျးပွတတျတယျမဟုတျလား။ဒီတဈပတျကို အပိုငျး ၂ပိုငျးပဲထှကျတယျဆိုရငျကိုယျတှမှော နောကျတဈပတျအတှကျကွိုပွီးခနျ့မှနျးရ၊စောငျ့ရနဲ့ အလုပျတှကေိုရှုပျနတေော့တာပါပဲ။ကိုရီးယားကားမှနျသမြှ မလှတျတမျးအားပေးသူဆိုရငျတဈခြို့ဇာတျလမျးတှဲတှေ နောကျအပိုငျးဘာဖွဈမလဲဆိုတာ ကွိုသိနတေတျပါ့။
တဈပိုငျးကွညျ့ပွီး နောကျတဈပိုငျးဆကျမကွညျ့ဖို့ကို ဘယျလိုမှစိတျမနိုငျကွပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ဘယျလောကျပဲ ညဘကျနောကျကနြပေါစေ။ကိုယျကွညျ့ခငျြတဲ့အပိုငျးကိုဆကျကွညျ့တတျတာ ကိုယျတှလေိုရုပျရှငျခဈြပရိသတျတှပေါပဲ။အမကေ အိပျလို့ပွောရငျ စောငျခွုံပွီးဖုနျးဖှငျ့ဆကျကွညျ့နကွေ
ကိုယျတှေ သဘောတူတဲ့မငျးသား၊မငျးသမီးစပွီးကြီစယျနကွေပွီဆို ကိုယျတှပေါးစပျက ပိတျလို့မရတာမြိုး…
မငျးသားနဲ့မငျးသမီးတဈယောကျကိုတဈယောကျကြီစယျကွတယျ။သဝနျတိုကွတယျဆိုရငျကို ကွညျ့ရတဲ့ပရိသတျတှကေပါ လိုကျပွီးကွညျနူးနတေတျ။
ဒါကတော့ ကဒေရာမာခဈြသူတိုငျးရဲ့ဆန်ဒဖွဈမယျထငျပါတယျ။ကိုယျတှသေဘောကရြတဲ့မငျးသားမငျးသမီးတှကေို ထပျပွီး တှခေ့ငျြသေးတာကွောငျ့ ဇာတျလမျးက ပြျောစရာဇာတျသိမျးခနျးလေးဖွဈသှားရငျတောငျ နောကျထပျဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ အပိုငျးတှဲထပျထှကျဖို့မြှျောလငျ့နတေတျကွပါတယျ။
ကဲ ဟုတျရဲ့လား K-drama Fan လေးတို့ ။တဈခွားအကွောငျးအရာလေးတှရှေိခဲ့ရငျ မြှဝခေဲ့ဦးနျော
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ မင်းသား Kang Ha Neul အကြောင်း